Ukusebenza kahle komklamo - JJD MACHINERY CO., LTD.
Ukusebenza kahle komklamo
I-JJD iyakujabulela ukufakazela ukwakheka ukuze ibe ngumkhiqizo. Ithimba lethu lokuklama lisebenzisana kakhulu nokukhiqiza kanye namakhasimende ethu ukuqinisekisa ukulethwa okufika ngesikhathi. Sinesipiliyoni somsebenzi wokuwela endaweni enhlobonhlobo. Sihlela njalo kusengaphambili, silungiselela enye ikhambi futhi sihambisane namakhasimende ngokushintshwa. Sizoba nesibopho sokulethwa ngobuqili ekwakheni, ekwenziweni nasezingeni, sisuse ukwahluka, sinciphise izindleko zemfucuza futhi sithuthukise umjikelezo wempilo.
Ngokusebenzisana ngokubambisana, abaklami beJJD 'banegalelo ekwenzekeni kwento ngendlela elandelayo:
● Hlola izindleko nokusebenza kwenqubo
● Nikeza uhlelo olususelwa enkombeni yokugcina ehambisana namakhasimende
● Qinisekisa ukuthi ingxenye yokuhlangana ihlangabezana nezidingo zamakhasimende ngokuqiniseka kwekhwalithi
Sebenzisana neminyango yokusebenzisa amathuluzi kanye ne-prototype
Umgomo uwonkewukukwenza ngcono ukwakhiwa kokwenza izinto kalula, ukunciphisa iziphene zokukhiqiza nokunciphisa izindleko. Iqembu lonjiniyela abanolwazi kakhulu nokusebenzisa ubuchwepheshe bamuva liqinisekisa ukuthi izici ezibalulekile zencazelo zingafinyeleleka ngenqubo ekhethekile yokwakha. Isoftware Modelling Software 3D Casting Simulation yethu ye-Mathematics ayigcini nje ngokunciphisa amaphutha engxenye kepha yenza kube lula ukusebenzisa amathuluzi ngobunzima nokugqokwa.